Global Voices teny Malagasy » Amazona Breziliana : Mitolona Haharaka Ny Onjan’ny Fitombon’ny Mponina Ao Amin’ny Toby Famokarana Herinaratra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jona 2013 7:16 GMT 1	 · Mpanoratra Pública - Agência de jornalismo investigativo Nandika (en) i Jen Fumero, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fampandrosoana, Fanabeazana, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
Vidas em Trânsito  (Fiainana an-tselika) [pt] no lohateny niandohan'ity tantara nosoratan'i Ana Aranha ity ary isan'ny fanadihadiana manokan'ny antokon-draharaha fanaovan-gazety mpanao fanadihadiana Breziliana Pública #AmazôniaPública  (Public Amazon),izay mitatitra ny fiantraikan'ilay tetikasa fanorenana lehibe manamorona ny reniranon'i Madeira ao amin'ny fanjakan'i Rondônia any Brezila. Hatao in-dimy mamoaka ato amin'ny Global Voices Online ity tantara ity.
Tamin'ny lahatsoratra voalohany  tamin'ity andiany ity dia hitantsika ny fiantraikan'ny fanorenana toby famokarana herinaratra Jirau tany Madeira, Rondônia, tanànan'ny mpanjono Breziliana any Jaci Paraná. Mifamatotra avy hatrany ny fitroaram-bahoaka sy ny korontana ara-tsosialy amin'iny faritra iny.
Mitovy ihany ny andraikitry ny tohodranon'i Jirau sy ny toby famokarana herinaratra ao amin'ny ranon'i Santo Antonio  [en], tohodrano naorina eo amin'ny reniranon'i Madeira ihany koa. Ny maha-samy hafa azy fotsiny dia manintona olona bebe kokoa ho any Porto Velho, renivohitry ny fanjakana federaly, sy ireo faritra ao aminy ny tohodranon'i Santo Antônio. Nanery ny mponina amoron-drano izay zatra niaina tamin'ny faritra mando hifindra toerana ny tohodranon'i Santo Antônio ao amin'ny tanànan'i Jaci Paraná. Amin'io lafiny iray io dia, na manangana trano any amin'ny faritra hafa, na manome onitra ny mponina ny tobim-pamokarana herinaratra.
Mba hiatrehana ny fitombon'ny mponina any amin'ny faritry ny tohodranon'i Jirau, ny tanànan'i Jaci Paraná dia tokony handray 20 tapitrisa reais (manodidina ny 10 tapitrisa dolara Amerikana) fara-faha keliny avy amin'ny Energia Sustentável do Brasil  [en]- orinasa miandraikitra ny tohodranon'i Jirau, izay manana ny orinasa marorantsana Frantsay GDP Suez ho isan'ny mpiray antoka lehibe ao aminy. Nampanantenaina fa hananganana sekoly, sampan-draharaha misahana ny fahasalamana, sampan-draharahan'ny mpitandro filaminanan'ny tontolo iainana, rafitra fanangonana, fanadiovana ary fizarana rano fisotro ary fanamboaran-dàlana rarivato io vola io.
Toy izany no nitranga tamin'ny fanorenana ilay tobim-pahasalamana fototra ( atao hoe : ‘Unidade de Pronto Atendimento’ ao amin'ny firenena) izay tokony ho natsangana ho fiatrehana ny fangatahana vonjy taitra/aina ao Jaci. Nantenain'ireo mponina ireo fa tsaratsara kokoa ity atrikasa ity, hatramin'ny tsy nananan'ireto mponina 15.000 ireto afa-tsy toeram-pitsaboana iray monja. Rehefa eken'ny mpitantana ny tanàna dia tokony atsangana miaraka amin'ny famatsiam-bolan'i Jirau ity trano ity. Nandritra ny fitsidihana nataon'ny ” asa fanampiana ara-tsosialy” amin'ny Novambra 2011 dia tsikaritry ny teknisiana avy amin'ny tetikasa Santo Antônio IBAMA fa tsy mitohy intsony ilay asa. Nanaovana tatitra  tany Brasilia io tranga io ary nangatahana ny didy fanamelohana ny orinasa Energia Sustentável.
Nahitàna ekipa mpanao gazety telo avy amin'ny Agência Pública de Reportagem e Jornalismo Investigativo ny tetikasa Amazônia Pública  izay nitety ny faritra Amazoniana telo tamin'ny Jolay ka hatramin'ny Oktobra 2012- isan'izany ny toby famokarana herinaratra ao amin'ny reniranon'i Madeira, ao amin'ny fanjakan'i Rondônia. Ny fitantarana rehetra dia mikendry ny itrandrahana ny hasarotry ny fampiasam-bola ao an-toerana, atao any Amazona ankehitriny -isan'izany ny fifampiraharahana sy ny marimaritra iraisana amin'ny lafiny politika ary ny fihainoana ireo mpandray anjara rehetra- (governemanta, orinasa, fiarahamonim-pirenena ) mba handinihina ny vanim-potoana misy ny fampiharana ireny tetikasa ireny. Ny tombontsoan'ny besinimaro no zavatra kinendrin'ny tantara tahaka izany sy ny asa vokarin'ny Pública : ahoana ny fiantraikan'ny fifampiraharahana ara-politika sy ara-toekarena amin'ny fiainam-bahoaka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/02/48891/
 Fampanantenana Poakaty Nahatezitra ny Amazoniana Manamorona ny Rio Madeira : https://mg.globalvoicesonline.org/?p=48173
 Bresila : Nesorin'ny Toby Famokarana Herinaratra Fa Niverina Eny Amoron-Drano Ny Mponina: https://mg.globalvoicesonline.org/?p=48594
 lahatsoratra voalohany: https://globalvoicesonline.org/2013/04/15/construction-project-fuels-sex-and-violence-in-brazilian-amazon/
 toby famokarana herinaratra ao amin'ny ranon'i Santo Antonio: http://en.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_Dam
 Nanaovana tatitra : http://issuu.com/contato.publica/docs/ibama_vistoria_social_upa_jaci/1
 alàlana : http://issuu.com/contato.publica/docs/jirau_lo/1
 tetikasa Amazônia Pública: http://www.apublica.org/amazoniapublica/?page_id=19